Thursday December 26, 2019 - 02:02:44 in Wararka by Super Admin
Taarikhda Somaliland, gaar ahaan Dekeda Malaagada Berbera waxa shaqaalaha Faraca-bada lagu sameeyey isbedel xadaaarad iyo hour-socod ka muuqdo
Taarikhda Somaliland, gaar ahaan Dekeda Malaagada Berbera waxa shaqaalaha Faraca-bada lagu sameeyey isbedel xadaaarad iyo hour-socod ka muuqdo, waxanan dhowaan daawanaynay iyadoo shaqaalaha hawlaha, Maraakiibta loo soo xidhay aqoon korodhsi ku saabsan shaqada Maraakiibta ee soo xidhista iyo furista iyo weliba kuwo ku takhakhusay bayloodnimada Taaga casriga ah ee dekeda berberi dhowaan lasoo degtay. Abaal-marinta iyo aqoon-korodhsigu, waa laf-dhabarka shaqaalenimo, iyadoo Hayadda shaqaaleheeda aqoon-kordhinta lagu sameeyey ay isbedel xadaaradeed oo mustaqbal la imanayaan, isla markaana adeegyada dekeda shaqaalaha aqoonta lehii waxay ka dhigayaan mid la tartanta dhiggeeda dunida.
Sidoo kale, waxaynu ka wada-war-qabno waxqabadka bilaha ah ee Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi ka fuliso, laamaha dawlada ee dalka, iyo mashaaricaha kala duwan ee isdaba-jooga ah, sidaas daraadeed aniga shaqsiyaan waxa aad isoo jiitay masuul kamid ah Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi, oo runtii leh, karti, daacadnimo iyo dedaal waxqabad oo u sameeyey labadii sanadood ee lasoo dhaafay.
Masuulkaas waxqabadkiisa iyo hanaankiisa masuuliyadeed inta badan uu soo jiitay qaybaha bulshada caafimaadka qabtaa ee aragta wanaaga Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi, waa Maareeyaha Dekedaha Somaliland Eng. Siciid Xasan Cabdilahi, oo runtii la yimmi hanaan hoggaamineed oo wadaniyadii ka muuqato iyo dedaalo uu ku horumarinaayo Dekeda Berbera iyo weliba kuwa yaryar ee dalka.
Tallaabooyinka Xukuumadu ku dhisayso Dekedo badan, ayay dadka gorfeeya cilmiga dhaqaaluhu waxay sheegayaan in ay sababaysa koboc dhaqaale oo dalku gaadho, iyadoo ay kor u qaadmi doonaan illaha dakhli ee dalku, sidoo kalena ay sadex-jibaarmi doonaan lasoo bixi-taanka Khayraadka badda ee Kaluunku kowka yahay, oo ay bulshadeena Somaliland ku dhiiran doonto. Guulaha iyo waxqabadka noociisa aan weli hore loo arag, ee Maareeyaha Dekedda Berbera Eng. Siciid Xasan Cabdilahi, ku tallaabsadday, ayaa lagu sheegay waxyaabaha u fudeydiyey, inuu daacad ka noqday gudashada waajibaadkiisa shaqo ee uu qaranka uga waakiil yahay. La soco qaybaha dambe.
Cabdisamad Axmed Warsame